May 12, 2020 - Lupyo News
ကောင်မလေးက ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့… “ကိုကြီးအိပ်နေတာ မနှိုးရဲဘူး”တဲ့…
May 12, 2020 by Lupyo News
ကောင်မလေးက ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့… “ကိုကြီးအိပ်နေတာ မနှိုးရဲဘူး”တဲ့… အရမ်းသဘောကျလို့ ကူးယူလာတာပါ။ တစ်ခါတုန်းက ကျနော့်မှာ သူ့အိမ်က ဒရိုင်ဘာကို အင်မတန်နိုင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်…..။ ဒရိုင်ဘာက သူ့ထက် အသက်ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က “ကို” တပ်ပြီး ခေါ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းကတော့ နာမည်ပဲခေါ်ပါတယ်…။ စကားပြောလည်း သူငယ်ချင်းက မင်းနဲ့ ငါပဲ …. ဒရိုင်ဘာအကိုကြီးကတော့ သူ့အလုပ်ရှင်ဆိုတော့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံရတာပေါ့လေ… ဒီကောင်က ပြောစရာရှိလည်းပြော၊ ဆဲစရာရှိလည်းဆဲ… သဘောကောင်းပေမယ့် အထက်စီးတော့ဆန်ပါတယ်… တခါတလေ ကိုယ်ကတောင် ကြားထဲကနေ ဝင်အားနာရတယ်… ဒရိုင်ဘာအပေါ် သူပြောပုံဆိုပုံတွေက ရင့်သီးပါတယ်… ဟိုကတော့ သည်းခံရှာပါတယ် အလုပ်ရှင်မလား… ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့… သူငယ်ချင်းက ဒေါကန်နေပါတယ်…. ဘာဖြစ်တာလဲမေးလိုက်တော့ သူ့ဒရိုင်ဘာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ မလာလို့တဲ့… ဒါနဲ့ … Read more
လှိုင်သာယာစက်မှူ့ဇုန်မှ တရုတ်နည်းပညာရှင်တစ်ဦး အသတ်ခံနေရတဲ့ CCTV ထွက်ပေါ် “ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်မှ တရုတ်နည်းပညာရှင်တစ်ဦး အသတ်ခံရ”CCTV ထွက်ပေါ် မေလ(၁၁)ရက် ညနေ(၃:၃၀)တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အလယ်ကျေးရွာ၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ ဦးထွန်းညိုလမ်းမဘေး ရပ်ထားသော ကားတစ်စီးပေါ်တွင် လူတစ်ဦးဓါးဒဏ်ရာများဖြင့် လဲနေကြောင်းသတင်းအရ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်အဖွဲ့ အခင်းဖြစ်နေရာသို့သွားခဲ့ရာ ကားပေါ်၌ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဓါးဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်ရှိ Myanmar Golden Forest နည်းပညာရှင်တရုတ်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ရန်ဘန်ချောင် အသက်(၃၆)နှစ်ဖြစ်ပြီး ဝဲဘက်ရင်ညွှန့်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ယာဘက်ဘေးထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဝမ်းဗိုက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်တို့ဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်းမှအမှုကို (ပ) ၁၁၂၆/ ၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ (၃၀၂) ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မျက်မြင်သက်သေများ၏ပြောပြချက်အရ သေဆုံးသူသည် ကားဖြင့်အပြင်သို့ သွားရောက်စဉ် … Read more
အလကားနေရင်း ဘလိုင်းကြီးဝင်ဆဲတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းသားချော ဇေရဲထက်ပွဲကြမ်းပြီ
အလကားနေရင်း ဘလိုင်းကြီးဝင်ဆဲတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းသားချော ဇေရဲထက်ပွဲကြမ်းပြီ ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်တော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစကားတွေနဲ့ မဆဲဆိုသင့်ပါဖူး။ ပြည်သူတွေဆိုတာက ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့သူရှိတယ်။ မုန်းတဲ့သူတွေလဲ ရှိမှာပါပဲ။ ကိုယ်က တိုင်းသိပြည်သိ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လုပ်နေပီးတော့ ကိုယ့်ကို လာဆဲတဲ့သူတွေကို ပြန်ပီး မဆဲသင့်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် ခုလိုပြန်ဆဲတော့ မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ကျဆင်းကုန်ပီပေါ့ ပြည်သူတွေကလဲ အကောင်းမြင်မှာ မဟုတ်ကြတော့ဖူး ဒါကတော့ ကျုပ်အမြင်လေးကို ပြောပြတာပါ။ မိဘပြည်သူတွေအဲ့အမြင်တော့ မပြောတတ်ဖူး။ ရင်ထဲရှိတာလေးတွေ မန့်ခဲ့ပေးကြပါအူး #ပေသီး# ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည် ============== unicode အလကားနရေငျး ဘလိုငျးကွီးဝငျဆဲတဲ့ကောငျတှကေိုမငျးသားခြော ဇရေဲထကျပှဲကွမျးပွီ ကြုပျအမွငျပွောရရငျတော့ နိုငျငံကြျောမငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး မိုကျမိုကျရိုငျးရိုငျးစကားတှနေဲ့ မဆဲဆိုသငျ့ပါဖူး။ ပွညျသူတှဆေိုတာက ကိုယျ့ကို အားပေးတဲ့သူရှိတယျ။ မုနျးတဲ့သူတှလေဲ ရှိမှာပါပဲ။ ကိုယျက … Read more
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်… အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ချောင်းရိုက်တွေ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို ၁၀ ကားလောက် နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်..အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ …။ တစ်ချိန်မှာ ငါ့အဖေတွေ ငါ့အမေတွေဆိုပြီး သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်….ပြသာနာအကြီးကြီးတွေပါ။မသိနားမလည်တဲ့ ညီမလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မြင်ရတွေ့ရတာတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေမို့ပါ တစ်နေ့တစ်နေ့ ချက်ဘောက်ရီကွက်စ်ထဲမှာ လာအကြံဉာဏ်တောင်းကြတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအများစုမှာ တူညီတဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေ နယ်ကျွံကြတဲ့အခါ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာပါပဲ …။ အချို့ဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီလူကို ဆက်လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာတောင်မှ ဒီလိုRecordတွေ ပေါက်ကြားမှာစိုးရိမ်လို့ ကြိတ်မှိတ်ရှေ့ဆက်နေရတာတွေ၊ အချို့ဆိုရင် လုံးဝပြတ်သွားပြီး သူ့စော်နဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဘဲနဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေတာတောင်မှ … Read more
တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လား ထွက်ပြေးပြီ
တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လား ထွက်ပြေးပြီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည့် တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားသည် Hotel Quarantine မှ ထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းအား Quarantine ထား ရှိခဲ့သည့် ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်မှ City Hotel Yangon အား မေ ၁၁ ရက် ညနေ ၅နာရီက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖြေကြားခဲ့သည်။ “သူက ညတုန်းက Check out (မေ ၁၀ ရက်ည) လုပ်သွားတယ်။ သူက Check Out လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ ဟိုတယ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့” ဟု တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ထို့ပြင် မေ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့် တွင်လည်း … Read more
ဖေဖေမြင့်မြတ်ရဲ့ကားကြီးကို ရေဆေးပေးနေတဲ့ သားလိမ္မာလေး မြတ်သူရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယို
ဖေဖေမြင့်မြတ်ရဲ့ကားကြီးကို ရေဆေးပေးနေတဲ့ သားလိမ္မာလေး မြတ်သူရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သဘာဝကျကျသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကြီးတစ်ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ မြင့်မြတ်က ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့အလျောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို လက်မလည်အောင် ရိုက်ကူးနေရပြီး လက်ရှိမှာတော့ ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်နားထားပါတယ်။ မြင့်မြတ်က ရှုတင်မရှိတုန်းလေး သူ့ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးက အလှူအတန်းတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက ဂျူနီယာဂျင်းကောင်လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့သားလေး မြတ်သူကလည်း ဖေဖေနဲ့ ပိုပြီး နီးကပ်စွာ နေထိုင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့ မြတ်သူလေးက ဖေဖေမြင့်မြတ်ရဲ့ ကားကို ရေဆေးပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မြတ်သူလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မြတ်သူလေးက အခုဆိုရင် တစ်နှစ်နဲ့ ကိုးလကျော်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တစ်ခြားကို ချစ်စရာကောင်းလာတာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း … Read more
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Vlog ရိုက်ထားတဲ့ သမီးလေး ကလိုဝီရဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြပြီး စနောက်လိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Vlog ရိုက်ထားတဲ့ သမီးလေး ကလိုဝီရဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြပြီး စနောက်လိုက်တဲ့ စမိုင်းလ် ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ စမိုင်းလ်ကတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို အရင်ကလောက်မလုပ်ကိုင်တော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ရဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပေါ်ရှာနဲ့ ကလိုဝီတို့ကလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိပြီး အနေအေးလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်ရှာကတော့ မေမေ့လိုပဲ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပြီး ကလိုဝီလေးကတော့ ငယ်သေးတဲ့အတွက် သူမဝါသနာပါရာလေးတွေကို လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ ကလိုဝီလေးက သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် YouTube channel တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပထမဦးဆုံး Vlog မှာ သူမရဲ့ ဂိမ်းစက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလိုဝီလေးရဲ့ ပထမဦးဆုံး Vlog ကို မေမေစမိုင်းလ်ကတော့ “ကလိုဝီလေးရဲ့ … Read more
ချစ်သူ နဲ့ သူ့ကြား လက်တွဲပြုတ်အောင် သွေးထိုးနှောင့်ယှက်နေတဲ့ သူတွေကို သတိပေး လိုက်တဲ့ ဇေရဲထက် နှုတ်ခမ်းနီ မလေးတွေ ရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသားချော ဇေရဲထက်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီး လည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီး သားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေ ကို ဇာတ်ရုပ် တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ကာ သိမ်းပိုက်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပေါ့ပါးစွာ နေတတ်ပြီး သူ့ရဲ့ ချစ်သူကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ရဲ့ရှေ့ တရားဝင်ချပြခဲ့သူပါ.။ ဒီနေ့ မေလ (၁၁)ရက်နေ့မှာတော့ ဇေရဲထက် သူနဲ့ ချစ်သူ နဲ့ကြား သွေးကွဲကာ ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေ ကို သတိပေးတဲ့စာလေး “ငါတို့နှစ်ယောက်က ဘယ်သူ ဖျက်ဖျက် သွေးမ … Read more
အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေးအဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ….ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ အားလုံးအဆင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေးအဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား။ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေလား သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ဘဝမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီလား စိတ်မပူပါနဲ့ မဟာသမယသုတ်ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ မဟာသမယသုတ်ပ ရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုစ ပူဇော်ကာစမှာ အလွတ်ရစရာမလိုပါဘူး စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပူဇော်တတ်ရင်ပဲ ရနေပါပြီ စပြီးပူဇော်ကြည့်ယုံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်အနေဘယ်လောက်အေးချမ်း လာတယ်ဆိုတာသိလာရပါမယ်။ ပူဇော်တဲ့သက်တမ်းရလာတာနဲ့အမျှ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အဆင်ပြေမှုတွေ တိုးတတ်မှုတွေ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရလာပါလိမ့်မယ်။ လောကီချမ်းသာတင်ပဲလား မဟုတ်သေးပါဘူးနော် လောကုတ္တရာအတွက်ကြီးမြတ်သောအထောက်အပံ့ကောင်းတစ် ခုကိုမိမိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့လာရပါမယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာပါမယ် ဘဝမှာကောင်းမြတ်သောမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ရှင်သန်လာပါမယ် ဘဝတိုးတတ်အောင်မြင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တာ မဟာသမယသုတ်ပါပဲ။ ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်ကင်းစေနိုင်တာလည်း မဟာ သမယသုတ်တော်ပါပဲ လောကအလယ်မှာအထက်တန်းကျကျ မျက်နှာပန်းလှလှ လောကီ လောကုတ္တရာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်။ မဟာသမယသုတ် တော်ကြီးကိုသာပူဇော်ကြပါ အေးချမ်းပါလိမ့်မယ် အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ် … Read more
ဆိပျဖွူတှငျ လပွေငျးကွောငျ့ အိမျ ၆၄ လုံးပကျြစီး၊ မိနျးကလေး ၁ ဦး မိုးကွိုးစကျကှငျးမိ
ဆိပ်ဖြူတွင် လေပြင်းကြောင့် အိမ် ၆၄ လုံးပျက်စီး၊ မိန်းကလေး ၁ ဦး မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိ မကွေးတိုင်း၊ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်မှာ မေလ ၁၁ ရက် ညနေပိုင်းက လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ ကျေးရွာ ၅ ရွာမှ လူနေအိမ် ၆၄ လုံး အမိုးလန် ပျက်စီးခဲ့ရပြီး မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိလို့ အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦး ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ မြို့နယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနက သိရပါတယ်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ တက်မကျေးရွာ၊ ကမ္ဘာနီကျေးရွာ၊ အနောက်ကမ်းဖြူကျေးရွာ၊ တပေါင်းကျေးရွာနဲ့ ဘဲကျကျေးရွာတို့မှာ လူနေအိမ် ၆၄ လုံး အမိုလန်ပျက်စီးခဲ့​တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါညနေပိုင်းက သက္ကယ်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထွန်ကျေးရွာနေ ၁၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူ တဦးဟာ ကျေးရွာတွင်းရှိ သရက်ပင်အောက် … Read more